ဘဝမှတ်တိုင်: ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအတွက် - Score! World Goals v2.41 [Money Mod]
ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအတွက် - Score! World Goals v2.41 [Money Mod]
ဘောလုံးဝါသနာရှင်ဘော်ဒါများတွက် ဘောလုံး Game လေးတစ်ခုရထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘောလုံးကိုအရှုးအမူးဝါသနာပါတယ်ဗျ။ အခု Game လေးကိုတော့ ကျွန်တော် ရရချင်း တင်ပေးလိုက်တာပါ။ Screen Shot တွေကို ကြည့်ပြီး တော်တော်သဘောကျလို့ပါ။ ကျွန်တော်စမ်းပြီး မကစားကြည့်ရသေးပါဘူး။ ညကျမှအေးဆေးကစားကြည့်ရပါဦးမယ်။ မကစားကြည့်ရသေးတဲ့အတွက် Game အကြောင်းမရှင်းပြနိုင်သေးတာ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘော်ဒါတွေလည်း အောက်မှာ Screen Shot ကိုတင်ပေးထားတာ ကြည့်ကြည့်ပါဦး တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျာ။ ဘော်ဒါတွေလည်းအကြိုက်တွေ့စေ ရမယ်လို့ ယုံကြည့်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/26/2014 11:13:00 pm